Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any UK » Glasgow Green: University of Glasgow dia nanambara ny fikasana hampihenana ny fandefasana gazy karbonika amin'ny raharaham-barotra
Hamporisihina ny mpiasan'ny oniversite mba hisorohana ny dia lavitra na aiza na aiza mety, hisafidy fitateram-bahoaka amin'ny alàlan'ny sidina, handinika ny safidin'ny fitaterana mandritra ny fangatahana famatsiam-bola ary hampitombo ny vokatra azo avy amin'ny dia tsy azo ihodivirana.
Talohan'ny areti-mandringana COVID-19, ny fitsangatsanganana an-tsokosoko dia 22% ny dian-karbaona isan-taona an'ny oniversite - manodidina ny 13,194 taonina karbôna dioksida, na tCO2e
Ny drafitra dia miantso ny Colleges efatra an'ny oniversite mba hanao ezaka amin'ny fampiharana drafitra maharitra maharitra, hanampiana ny mpiasa handray fanapahan-kevitra manokana momba ny fampihenana ny dian-tongotr'izy ireo manokana ary hanao tatitra isan-taona momba ny fivoarany mba hahazoana antoka fa tratra ny tanjona.
Ny University dia nametraka hetsika efatra hitarihana ny mpiasa rehefa manapa-kevitra momba ny dia amin'ny raharaham-barotra amin'ny ho avy
The University of Glasgow dia nametraka drafitra vaovao feno faniriana hanapahana ny famoahana entona karbaona amin'ny 7.5% isan-taona.
Talohan'ny Covid-19 areti-mandringana, fitsangatsanganana ara-barotra dia mitentina 22% amin'ny dian-tongan'ny karbaona isan-taona ao amin'ny Oniversite - manodidina ny 13,194 taonina karbôna dioksida, na tCO2e. Ny ankamaroan'ny fandefasana entana mifandraika amin'ny dia dia noforonin'ny sidina iraisam-pirenena sy anatiny.
Ankehitriny, ny Oniversite dia mikendry ny hampihena ny dian-tongotra totaliny ho 5,597 tCO2e hatramin'ny 2030 amin'ny alàlan'ny fanampiana ny mpikaroka sy ny mpikaroka momba ny diplaomasia hanao safidy maharitra maharitra mandritra ny folo taona ho avy.
Hamporisihina ny mpiasan'ny oniversite mba hisorohana ny dia lavitra raha mety, hisafidy fitateram-bahoaka amin'ny alàlan'ny sidina, handinika ny safidin'ny fitaterana mandritra ny fangatahana famatsiam-bola ary hampitombo ny vokatra azo amin'ny dia tsy azo ihodivirana.
Ity hetsika ity dia iray amin'ireo fampiharana ambony indrindra momba ny tolo-kevitra naroso tao amin'ny Glasgow Green: Ny valin'ny University of Glasgow momba ny antontan-taratasy momba ny paikadin'ny toetr'andro, natomboka tamin'ny Novambra tamin'ny taon-dasa.
Ny paikady dia nametraka tanjona ho an'ny Oniversite hahatratra ny famoahana entona entona aotra zero amin'ny 2030, dimy taona talohan'io noho ny tanjona napetraky ny drafitra andrim-panjakana teo aloha.
Ny fitomboan'ny fiakaran'ny fiovan'ny fiovana dia valin'ny fifampidinihana nifanaovana tamin'ny mpiasa sy ny mpianatra, izay nanosika ny oniversite handeha lavitra kokoa sy haingana kokoa amin'ny ezak'izy ireo hamaha ny olan'ny toetr'andro.
Ny drafitra dia miantso ny Colleges efatra an'ny Oniversite mba hanao ezaka amin'ny fampiharana drafitra maharitra maharitra, hanampiana ny mpiasa handray fanapahan-kevitra manokana momba ny fampihenana ny dian-tongotr'izy ireo manokana ary hanao tatitra isan-taona momba ny fivoarany mba hahazoana antoka fa tratra ny tanjona. Ny fandrosoana dia harahin'ny Vondrona maharitra maharitra ao amin'ny Oniversite, miaraka amin'ny tatitra ataon'izy ireo ho an'ny besinimaro.
Profesora Sally Wyke, talen'ny lefitra ao amin'ny Ivon-toerana momba ny fahasalamana sy ny fahasalaman'ny oniversite, no nitarika ny vondrona nanatontosa ilay torolàlana. Hoy ny profesora Wyke:
“Amin'ny maha oniversite miasa mafy fikarohana izay tafiditra amina tetikasa maro karazana eran'izao tontolo izao, dia fantatray fa ny fitsangatsanganana dia, ary hijanona, ampahany manan-danja amin'ny orinasa isan'andro ao amin'ny Oniversite.
“Fantatsika ihany koa fa, amin'ny tontolon'ny post-pandemie, ny safidintsika hampiasa teknolojia toy ny videoconferencing hanatsarana ny dia mankany amin'ireo dia ilaina indrindra dia be lavitra noho ny teo aloha.
"Miova ny laharam-pahamehantsika, ary manolo-tena hanampy ireo mpiasa hiova izahay miaraka amin'ny fananganana fahatsiarovan-tena amin'ny lafiny rehetra amin'ny fomba fiasan'ny Oniversite. Ny ampahany amin'io fanovana io dia hahatafiditra ny fanampiana ireo mpiasa vitsy an'isa izay mandrafitra ny ankabeazan'ny fandefasan-tsinay hampihena ny dian-tongotr'izy ireo manokana mba hahazoana antoka fa ny hafa, toy ny mpikaroka tany am-boalohany, dia hanana fotoana hanao dia lavitra. Handray fepetra koa izahay mba hahazoana antoka fa tsy misy mpiasa sahirana amin'ny ezaka ataon'izy ireo hampihena ny diany. ”
Dr David Duncan, Lehiben'ny tompon'andraikitra ao amin'ny University of Glasgow, dia nanampy hoe: "Ny areti-mifindra COVID-19 dia nanery ny oniversite, toy ireo fikambanana maro manerantany, mba hieritreritra ny fomba fiasa mahazatra mahazatra antsika. Ny fahombiazantsika hatrany amin'ny fampianarana, fikarohana ary fitantanana dia vokatry ny ezaka lehibe ataon'ny mpiasa rehetra hifanaraka amin'ny fomba vaovao toy ny videoconferencing, izay noporofoina fa fitaovana sarobidy tokoa.
“Rehefa mihena ny areti-mandringana, ary rehefa miomana amin'ny maha-tanàna hampiantrano ny fivorian'ny COP26 amin'ny volana novambra isika, dia fantatray fa hanomboka hisokatra indray izao ny fahafaha-mivezivezy. Na izany aza, nanolo-tena hampiasa ireo lesona nianarinay izahay tamin'ny taon-dasa mba hanampiana anay hampihena ny dian-tongan'ny karbaona anay ary hahatratra ny tanjonay fatratra hahatratra ny net-zero amin'ny 2030.
Ny University dia nametraka hetsika efatra hitarihana ny mpiasa rehefa manapa-kevitra momba ny dia amin'ny raharaham-barotra amin'ny ho avy:
Aza mandeha amin'ny toerana rehetra azo atao: Manoro hevitra ireo mpiasa hampiasa ny kaonferansa virtoaly arak'izay azony atao.
Manamboara vahaolana teknolojia ho an'ny virtoaly miasa ho tolo-kevitra fanampiana: Ireo mpikaroka izay mangataka famatsiam-bola dia antenaina hamaritana ny fomba hampihenany ny fiaraha-miasa amin'ny fikambanana mpiara-miasa amin'ny toerana hafa, miaraka amin'ny vola fanampiana natokana hamatsiana fitaovana miasa virtoaly avo lenta ho an'ireo mpiara-miasa mangataka izany.
Misafidiana fitateram-bahoaka rehefa mandeha: Ny fitsangatsanganana an-dalamby sy aotobisy izao no ho toerana misy anao mandritra ny fitsangatsanganana any UK any amin'ny toerana rehetra mety hisy, na dia mihoatra lavitra noho ny mandeha amin'ny rivotra aza ny vidiny.
Ampitomboy ny sandan'ny dia: Ny mpiasa dia tokony mikendry ny hanao ny ankamaroan'ny dia amin'ny alàlan'ny fananganana fivoriana fanampiny ho an'ny olona, ​​toy ny fotoana ahafahana manangana rohy fikarohana miaraka amin'ireo mpiara-miasa vaovao.
Ny fampandrosoana ny Green Glasgow paikady no fampandrosoana lehibe farany natao tao amin'ny University of Glasgow ny fanolorany tena hatrany hamahana ny olana ara-toetrandro.
Tamin'ny volana oktobra 2014, ny oniversite institiota fanabeazana ambony UK voalohany dia nanolo-tena hanafoana tanteraka ny orinasa indostrian'ny solika fosily ao anatin'ny folo taona. Tao amin'ny 2017, ny University dia nanao sonia ny Sustainable Development Goals Accord. Tamin'ny taona 2019, izy no lasa anjerimanontolo voalohany tany Skotlandia nanambara ny hamehana momba ny toetrandro. Tamin'ny volana aprily 2020, nanokatra ny Centre for Sustainable Solutions ny oniversite hanohanana ny vahaolana iraisam-pianarana, ny campus ary ny vahaolana eo amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiovan'ny toetr'andro.
Ny varotra sidina an'habakabaka amerikana dia mbola mena ihany